Dick's Sporting Zvigadzirwa Kutyaira Zvemidhiya neemail | Martech Zone
Vhiki rapfuura ndakawana muenzaniso wakanaka weiyo chaiyo nzira isinga nyatso kushandisa kushambadzira kweemail senzira yekutyaira traffic kuenda evanhu vezvenhau. Iyo email yakabva Dick's Sporting Zvigadzirwa.
Yakanga iri nyore, yakanyatsogadzirwa email iyo yaive neyakareruka kufona kuti chiitwe: Titevere pa Twitter uye gamuchira yakasarudzika dhodhi kodhi:
Dick akaita basa rakanaka rekushandisa chinyakare chishandiso, email kushambadzira, kutyaira traffic kune imwe yeanopenya matsva enhau enhau maturusi. Izvo vazhinji vevashambadziri vasingatarise ndezvekuti kuve nehukama hwakanaka hwevezvenhau kuvapo hakusi kungoisa zvigaro panzvimbo yega yega uye kumirira kuti vanhu vakuwane. Iwe unofanirwa kutyaira traffic kuti vanhu vatange kuita newe! Pfungwa yakapusa, ndinoziva, asi kazhinji isingatariswe kana uchitsanangura yako yemagariro zano.
Kwete chete kune kukurudzira kwekutevera Dick's Sporting Goods paTwitter, asi kupihwa, yakasarudzika (zvirinani kune avo vateveri vepa twitter) inopa inoita kuti unzwe sekunge uri kuwana chimwe chinhu chisina mumwe munhu. Iwe uri muDick's Sporting Goods Twitter denderedzwa uye iwe unobatsirwa nazvo.
Iko kutengesa zvakapfava, hakusi kwekubiridzira, uye hakudi kuita kwakawanda kuita. Izvo zvinopfuura chimwe chete - asi iwe unoona zvandiri kuwana.
Zvakawanda zvezvipingamupinyi zvechinyakare zvakabviswa kwandiri kuti nditore chikamu kana kutenga kubva kunaDick ndichishandisa zano iri. Zvaive nyore kutevedzera chinongedzo, rova ​​uteedzere uye uwane kodhi yekudzikisira uye ikozvino sezvo ini ndine kodhi yekubvisa, nhanho yangu inotevera ndeye zvichida kune yavo webhusaiti kuti vaone kana paine chimwe chinhu chandisingazive chandaida kusvikira ndawana chikonzero chekuenda kunotenga - kupenya!
Uye ikozvino vane mvumo-yakavakirwa miviri yekushambadzira kwandiri ku… email ne Twitter!
Tags: kuvaka kwechikwata
NeKutsvaga, Yechipiri Nzvimbo Ndiyo Yega Yekutanga kurasikirwa
Mbudzi 10, 2009 na5: 27 PM
Ichi chikonzero nei kushambadzira kwenzanga kuchiisa mari munharaunda dzemagariro nezvakakosha zvemukati / mhinduro pamwe nekutora chikamu uye kuzivikanwa. Nepo "pachinyakare" email yekupa inogadzirwa zvichibva pane izvo zvinoda kutengeswa nekambani, yekushambadzira pasocial yekutarisa inotarisa zvakanyanya pakubatanidza nharaunda nekugadzira kupihwa pamwe nekusimudzira
Mbudzi 11, 2009 na2: 37 PM
Akadaro Ben, uye ini ndinobvuma zvachose.